किन टुङ्गिदैन बुद्ध जन्मस्थल विवाद ? « Lumbini-Kapilvastu Day Blog
NAMOBUDDHA- Peace Cycle Rally »
प्रसङ्ग गरिब र गरिबीको छ, नेपाल त्यसको पर्यायवाची जस्तो । प्रसङ्ग स्वदेशको छ, देशको पहिचान, अस्तित्व र गरीबै भए पनि त्यसप्रतिको मायाको छ । हो, आज म कुरो गर्दैछु संसारका सबैभन्दा गरीबमध्येको एक देश नेपालको । मानौँ, एकसरो कछाड लगाएका तर धनबिना पनि आत्मसम्मानले बाँच्न चाहने सिनेमाका ती निरिह गरीब किसान एकछिनका लागि हाम्रो देश नेपाल हुन् । उनीप्रति धनीहरुले गरेको व्यवहार हाम्रो देश नेपालप्रति अन्य देशका नागरिक, नेता वा अझ सञ्चार माध्यमहरुले गर्ने व्यवहार ।
कुरो सान्दर्भिक छ तर अति संवेदनशील पनि । विषयको गम्भीरतालाई हेर्दा भुङ्ग्रोमा हात हाल्नु ठीक होइन कि भन्ने मलाई लागेको हो, तर ँस्वदेश’ सिनेमा हेरेपछि मेरो मनभित्र दबिएको यस विषयमा केही लेख्ने चाहना प्रस्फुटित भयो । स्वदेशको मायाले मात्र नभई पत्रकारिता अध्ययन तथा पत्रकारका रुपमा पनि धेरै समय बिताइसकेका कारणले यो विषय उठ्नुपर्छ भन्ने मलाई लागेको हो । कुरा हो, बुद्ध र बुद्धमार्गका बारेमा गत साता मात्र बेलायतको अल्डरशोर्टमा तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामाले दिएको वक्तव्यका बारेमा । नेपालको एक अनलाइन पोर्टलमा दलाई लामाले दिएको वक्तव्यका बारेमा एउटा खबर छापिएपछि हजारौं नेपालीले रिसको आगो पोखे दलाई लामाप्रति । यति धेरैका संख्यामा प्रतिक्रिया देखेर साँच्चै मलाई लाग्यो, देशप्रेम र देशको अस्तित्वका लागि उर्लेको जमात हो त्यो । हुन त कतिपयले समाचार सायद राम्रोसँग नपढी जथाभावी लेखेका पनि हुन् तर समग्रमा प्रतिक्रियाहरु बुद्ध नेपाली हुन् भन्ने भावनाले ओतप्रोत देखिन्थ्यो । दलाई लामाले सीधा शब्दमा बुद्ध भारतमा जन्मिएका हुन् भनेका थिएनन् । उनले भनेका थिए स्पष्ट शब्दमा, ‘बुद्धमार्गको सुरुवात भारतबाट भएको हो । कोहीकोही नेपालीले बुद्धलाई नेपाली भन्छन्, केहीले भारतीय । तर यसबाट केही फरक पर्दैन ।’ तर भारतमा अर्को लुम्बिनी बनेको र कैयौँ ठाउँमा भारतीयहरुले बुद्ध भारतीय हुन् भन्ने दाबी गर्दछन् भन्ने चर्को चर्चा चलेकै बेला दलाई लामाले त्यस्ता कुरा कोट्याउँदा हजारौंको संख्यामा उपस्थित नेपालीहरुमध्ये केही त्यति नै बेला तातिएका थिए । दलाई लामाप्रति तीतो प्रतिक्रिया दिए केहीले । बेलायती सञ्चार माध्यमहरुले भरिएको पत्रकार दीर्घामा एकजना अर्का नेपाली पत्रकार सहकर्मी र म बाहेक अरु नेपाली पत्रकारहरु कोही देख्न पाइएन त्यत्रो भीडमा । बेलायतका बीबीसी लगायत प्रतिष्ठित रेडियो, टेलिभिजन, पत्रपत्रिका तथा अनलाइन पोर्टलहरुबाट प्रशस्तै पत्रकारहरु कार्यक्रम स्थलमा भिडियो खिचिरहका थिए, नोट लेखिरहेका थिए । इमान्दार भएर भन्नै पर्ने हुन्छ मैले यहाँ, दलाई लामाले जब बुद्धमार्गको सुरुवात भारतबाट भएको हो भनेर कुरो सुरु गरे अनि केही नेपालीले उनलाई नेपाली भन्ने गर्छन् भने । एकजना नेपालीका नाताले र बुद्धको जन्मथलो नेपाल भन्ने सानैदेखि पढ्दै र सुन्दै आएका नाताले मेरो मुटुमा पनि चिसो पस्यो। यही भावना हजारौं नेपालीका मनमा पलाएको हो। केही नेपालीले बुद्धलाई नेपाली हुन् भन्छन् भन्नुको घुमाउरो अर्थ केहीले नेपाली भनेका हुन् तर उनी नेपाली वा भारतीय जे भएपनि फरक पर्दैन भन्ने लगायो जनमानसले । बुद्ध नेपालको लुम्बिनीमा जन्मिएका हुन् भनेर दलाई लामाले बोलिदेलान् कि भन्ने आशा गरेको ठूलो नेपाली जनमानसलाई दलाई लामाले घुमाई फिराई गरेको त्यो कुरो पटक्कै मन परेन । कार्यक्रम सकिएपछि प्रतिकि्रया लिने क्रममा सहभागीहरुले दिएको प्रतिकि्रयाबाट मैले यो निष्कर्ष निकालेकी हुँ ।
या त दलाई लामाले बुद्धले भारतको बोधगयामा ज्ञान पाएको विषयलाई प्रष्ट्याएर बुद्ध र भारतबीचको सम्बन्धलाई स्पष्ट पारेको भए हुनेथियो वा त्यति संवेदनशील विषयमा नबोलेको भए हुनेथियो । मैले माथि नै भनेझैँ केही नेपालीले बुद्धलाई नेपाली भन्छन् भन्दा किन केहीले मात्र ? उनी त पक्का नेपाली हुन् भन्ने प्रश्न नेपाली जनमानसमा उब्जिएको थियो । बुद्धको जन्मथलो जहाँ भए पनि बुद्धमार्गीहरुलाई फरक पर्न हुँदैन भन्ने कुराले झन् आगोमा घ्यु थप्ने काम गर्‍यो, बुद्ध त नेपालको लुम्बिनीमा जन्मिएका हुन् भनेर अभियानमा वर्षौंदेखि लागेकाहरुलाई । उनीहरुको ठाडो जवाफ र प्रतिक्रिया थियो, “बुद्धलाई केही नेपालीले मात्र नेपाली भन्ने होइनन्, बुद्ध पक्कापक्की नेपाली हुन् । अनि बुद्ध र लुम्बिनीसँग नेपाल देशको अस्तित्व गाँसिएको छ, त्यसैले बुद्ध कहाँ जन्मिएका हुन् भन्ने कुराले आँधिबेहरी नै ल्याउँछ, केही फरक पर्दैन भन्नु त अति नै गलत हो।”
संसारका बुद्धमार्गीहरुले त्यति साह्रै मान्दै आएका दलाई लामाले किन र कुन कारणले त्यसरी मन्तव्य दिएका थिए, त्यो उनै मात्र जान्दछन् । त्यसलाई हामी मध्येले पनि फरक-फरक तरिकाले हेरेकै छौँ । तर यो भन्दा पनि बढी चाखलाग्दो कुरा, हाम्रो जस्तो गरीब देशसँग जोडिएका गहन विषयलाई विकसित देश वा अझ ती देशका सञ्चार माध्यमले कसरी हेर्दा रहेछन् भन्ने हो । कलेजमा पत्रकारिता विषय पढ्दा गरिएको छलफल आज पनि मेरो दिमागमा ताजै छ । पश्चिमा सञ्चार माध्यमहरुले तेस्रो विश्वका मुलुकहरुका नकारात्मक समाचारहरुलाई मसला हालीहाली प्रचारमा ल्याउँछन् भन्ने विषयमा पढेको अझै याद छ मलाई । तेस्रो विश्वका गरिबी, भोकमरी, हत्या, आन्दोलन, बालश्रम शोषण आदिजस्ता विषयलाई उत्ताउलो बनीबनी प्रसारण गर्छन् आदिआदि । तर ती गरीब देशको अस्मिता र अस्तित्वसँग जोडिएका विषयमा उनीहरुको देशलाई चासो छैन भने सञ्चार माध्यमलाई पनि चासो नहुने रहेछ क्यारे ! दलाई लामाले बुद्धको राष्ट्रियताबारे बोलिसकेपछि मलाई पक्कापक्की लागेको थियो, ल अब आज यहाँ आएका यी बेलायती पत्रकारहरुले यो कुरो राम्रैसँग उठाउने भए । मेरा लागि त्यो आजको एउटा ठूलो स्कूप थियो । घर आएर मध्यरातमा मैले बीबीसी अनलाइन लगायत कैयन् अनलाइन पोर्टलहरु हेरेँ । कहिँ कतै कसैले पनि दलाई लामाले बुद्ध र बुद्धमार्गका विषयमा भारत र नेपाल दुवै देशको नाम लिएर बोलेका विषयलाई उल्लेख गरेको पाइनँ । पछि समाचार लेख्ने बेलामा मलाई एकछिन त संकोच भयो, कतै मैले मात्र यस विषयलाई उठाउनु गलत त हुँदैन? तर मेरो पत्रकारिता धर्मले त्यसो गर्न दिएन । दलाई लामाले जे भनेका थिए, त्यही मैले लेखेँ । त्यसप्रति थरिथरि प्रतिक्रिया आउनु मेरो वशमा नभएको कुरो थियो ।
लौ एकछिनलाई मानिलिऊँ बुद्ध इरानमा जन्मिएका थिए रे लगभग पच्चिस सय वर्षअघि । काल्पनिक कुरो गर्दैछु म । अनि इरानबाट इराक गएर बुद्धत्व प्राप्त गरेका थिए रे ! इरानले भन्छ, बुद्ध इरानी हुन् किनकि उनी इरानमा जन्मिएका थिए । इराकले भन्छ, इराकमा ज्ञान पाएकाले बुद्ध त इराकी नै हुन्। यस्तो विषयमा यी दुई देशका बीचमा विवाद भएको भए खाडी युद्ध यसैका निहुँमा हुने थियो होला । तेलको भण्डार दुवैमध्ये एउटा देशलाई च्याप्ने थिए होला अमेरिका, बेलायत वा अरु कुनै ठुलो देशले । अनि दलाई लामाजस्ता बुद्ध धर्मका गुरुले बुद्ध इराकी वा इरानी जे भए पनि फरक पर्दैन भन्दा कत्रो आतङ्क हुने थियो होला, आकाशै खसेजस्तो । तर, यही कुरा नेपालसँग बढी चासोको विषय भएकाले सानो, भुसुनो, गरीब देश नेपालमाथि कुनै चाख नभएका विकसित देशहरुलाई केही फरक परेन । उल्लेखसम्म गरेनन् दलाई लामाको भनाई ती देशका सञ्चार माध्यमहरुले । नेपालमा पनि तेलको भण्डार भएको भए वा विकसित देशहरुलाई सिधै फाइदा पुग्ने केही आकर्षण भएको भए, ती देशले नेपाललाई पक्कै च्याप्ने थिए होलान् ।
बुद्धको जन्मथलो नेपाल हो कि भारत, बुद्ध लुम्बिनीमा जन्मिंदा नेपाल वा भारत भन्ने राज्य नै छुटि्टएको थियो या थिएन, भारतमा जन्मिए भन्ने आधार के हो, आदि इत्यादि अनेकन् ऐतिहासिक तथ्यहरुमा विश्लेषण गर्नु मेरो यो लेखको उद्देश्य होइन । इतिहासकार, खोजकर्ताहरु र अभिलेखालयहरु यस कुराका साक्षी बन्नु पर्दछ । कुरा के हो भने, बुद्धको जन्मस्थलका बारेमा पछिल्ला केही वर्षमा चलेको विवाद अनि अभियान किन कहिल्यै टुङ्गोमा पुग्दैन? आजसम्म नेपालको राजनीति भारतबाट परिचालित छ भन्ने आरोप, प्रत्यारोप नेपाली राजनीतिक पार्टीहरुले एक अर्कामाथि लगाएकै छन् । देशमा एउटा संविधान समेत बन्न नसकेको र स्थायी सरकार समेत नभएको बिजोगलाग्दो अवस्थामा बुद्ध, लुम्बिनी र नेपालको अस्तित्वबारे भारतीय सरकारसँगै नेपालको सरकारले कुरो गर्ला भनेर आशा गरिहाल्न नसकिएला । तर, देशको पहिचानका लागि बुद्ध नेपाली हुन् भन्ने कुरा यति गहन छ भने गम्भीर रुपमा यस विषयको टुङ्गो लगाइनु अति जरुरी छ । किन यति धेरै चर्चा मात्र र आरोप-प्रत्यारोप मात्र हुन्छ यस विषयमा, कहिलेदेखि आयो बुद्ध भारतीय हुन् भन्ने कुरो? यसमा पनि अभियानकर्ताहरु समेतले घोत्लिनु र जनतालाई सुसुचित गर्न जरुरी छ । गरीब नै देश भए पनि स्वदेशको मायाले, अस्तित्वको खोजीले नेपालीहरुलाई तताएको छ, तर जति नै टाउको फुटाए पनि नेपालको सरकारले पहल नगरी, भारतले पनि चासो नदेखाई यो विषय टुङ्गिदैन भन्ने कुरामा भने विमति हुन सक्दैन ।
This entry was posted on July 5, 2012 at 12:53 am	and is filed under लेख / रचना. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.
2 Responses to “किन टुङ्गिदैन बुद्ध जन्मस्थल विवाद ?”
Mr Bhumiraj Tamang said
सिक्छ्या लिएको मुलुकको नागरिकता कोहि पनि हुनु सक्दैन,जुन मुलुकमा जनमा को थियो त्यो मुलुक को नागरिकता हुन्छा।तेस कारण भगोवान बुद्ध जहाँ बाट बुद्द्त्व प्राप्त गर्नु भएपनि नेपाली नै हुन्छ।संसारका मान्छे हरु बेलायत,अमेरिकामा पढेर किन त्यो मुलुकको नागरिकता भएन?भारतीय हरुको सोंच त राम्रो जत्ति सबै उसको भनेर नेपाली लाइ खोक्रो बनाउनु खोजेको?
पत्रकार संगिता मरहट्टाजीको लेख वस्तुनिष्ठ र सन्तुलित छ। दलाईलामाको वक्तव्यमा मैले पनि त्यहि सुनेको हो।बुद्धको जन्मथलो लुम्बिनी पहिले भारत भन्‍ने पनि थिएन, त्यो त विष्णुगुप्त चाणक्यले बृहत भारतको निर्माण गर्दा निर्वासित राजकुमार चन्द्रगुप्त मौर्यलाई राजा बनाई एकिकरणको अभियान पछि भारत बनेको हो, चाणक्य बुद्ध भन्दा धेरै पछिको एक विलक्षण गुरू हुन्। त्यसैले लुम्बिनी भारतमा पर्थ्यो, त्यसैले बुद्ध भारतमा जन्मेको हो र भारतीय हुन् भन्‍ने त कुरै भएन। हाल लुम्बिनी नेपाल भित्र पर्छ। त्यसैले बुद्धको जन्म नेपालमा भएको हो र उनी नेपाली हुन्। भारत बुद्धलाई भारतीय बनाउन पाए ठीक नत्र बुद्ध नेपालि हुन् वा भारतीय हुन् त्यसले केहि फरक पार्दैन भनेर दलाई लामालाई भन्‍न लगाएर आत्म तुष्टि लिन किन खोज्छ। पुरातात्विक प्रमाण आदि सबैबाट बुद्धको जन्म नेपालमा भएको हो भन्‍ने कुरा सर्वत्र जानकारी भईसकेपछि पनि भारतमा नक्कली लुम्बिनी बनाएर बुद्ध भारतमा जन्मेको हो भन्‍ने भ्रम छरेर अस्थिरता ल्याउने काम किन गर्छ? के भारत अब आफ्नै क्रियाकलापले विश्वबाट विलाउनै खोज्या हो? छल गर्नुको पनि हद हुन्छ नि। संयुक्त राष्ट्रसंघमा समेत “बुद्ध नेपालमा जन्मेको हो” भन्‍ने रेकर्ड रहिसकेकोले यो झेलबखेडामा बोल्‍न आवश्यक ठानिरहेको छैन।तर बुद्धलाई नेपालको राष्ट्रिय व्यक्तित्व बनाउन राष्ट्रीय विभूतिले सम्मान दिनुको अलावा पनि गर्नु पर्ने धेरै काम गर्दै जानु पर्छ। दलाई लामालाई यसतो अनावश्यक कुरा बोल्‍न लगाएको होइन भने स्पष्टिकरण देओस्।